Nahomby tamin'ny fanampiana ny fikambanana BestCities ny fikambanana amin'ny fananganana fifandraisana manerantany amin'ny kolontsaina rehetra
Home » Travel Associations News » Nahomby tamin'ny fanampiana ny fikambanana BestCities ny fikambanana amin'ny fananganana fifandraisana manerantany amin'ny kolontsaina rehetra
Mpitantana fikambanana iraisam-pirenena 24 no nanatrika ny Global Forum.
Ireo delege sy mpikarakara ny BestCities Global Forum dia niray hina nidera ny fihaonambe naharitra efatra andro, izay natao tao Tokyo tamin'ny volana desambra. Zato isan-jaton'ny solontena nohadihadiana no nanaiky fa hanome sosokevitra ny hanatrehana ny hetsika BestCities '2018 amin'ireo solontena iraisam-pirenena hafa, raha 95% kosa no nitatitra fa nihaona ny forum na nihoatra ny nantenain'izy ireo.
Nampiantranoina niaraka tamin'ny mpiara-miombon'antoka BestCities Global Alliance, Tokyo Convention & Visitors Bureau (TCVB), ny lohahevitra tamin'ity taona ity dia nantsoina hoe Building Global Connections Across Cultures. Notarihin'ny mpanolo-tsaina sy mpitarika indostrialy hajaina iraisam-pirenena, natambatra tamin'ny fandaharam-pianarana mirotsaka an-tsehatra miaraka amin'ny atrikasa ifanakalozana mivantana ny fandaharana feno.
Mifantoka amin'ny fananganana fahatsiarovan-tena ara-kolontsaina sy fahaiza-mampifanaraka bebe kokoa, fotoam-pizarana azo tsapain-tanana natao hanomezana hery ireo mpikarakara hetsika mba hamoronana traikefa voatokana ho an'ny solontena, mahatsiaro ny toerana nihaonany. Ny fampiharana atrikasa 'Cathedral Thinking' sary lehibe, nahafahan'ireo solontena nanangona ny traikefa niraisan'izy ireo hiarahan'izy ireo miresaka ny fomba sy fomba hanatrarana ireo tanjon'ny laharam-pahamehana ho an'ny mpiara-miasa aminy, ary koa ny firesahana ny anjara asa tohanan'ny BestCities ho avy izay mety hataon'ny BestCities amin'ny fanaovana izany. zava-misy.
Ny Lehiben'ny Birao BestCities, Jonas Wilstrup, CFO ao amin'ny Birao Fivoriambe Wonderful Copenhagen dia nilaza hoe: "" Ny Global Forum dia nanakoako tamin'ny masoivohonay. Ary koa ny fananganana fahatsiarovan-tena momba ny fahatsapana ara-kolontsaina, maro ny mpanatrika no naneho hevitra momba ny andraikitra lehibe ilain'ny BestCities amin'ny fanampiana azy ireo handresy ireo fanamby ara-kolontsaina hita, manomboka amin'ny fizarana fahalalana eo an-toerana ka hatramin'ny fampifandraisana ireo mpandahatra hetsika miaraka amin'ireo manam-pahaizana eto an-toerana.
“Amin'ny fotoana ahitantsika ireo firenena mampiasa fomba fijery tsy miankina na 'foko' kokoa, ny indostrian'ny fizahan-tany dia tsy nanana andraikitra lehibe indrindra. Ny fivoriana iraisam-pirenena dia mamorona seha-pifanakalozana fahalalana sy fiaraha-miasa izay afaka mihoatra ny fetra ara-kolontsaina sy ara-pinoana na sisintany ara-jeografika.
"Mino fatratra aho fa ny tsirairay izay miasa ao anatin'ny indostria misy antsika dia tokony handroso ary hanaiky ny andraikitra lehibe napetraky ny fivoriana maneran-tany ankehitriny mba hiantohana ny fahombiazan'ny tontolo ho avy, ny fitomboana ary ny fanavaozana."
Nampiantrano tao amin'ny Hotel Chinzanso Tokyo lafo vidy, ireo delegasiona dia afaka niaina ny tsara indrindra tamin'ny fandraisana vahiny sy fahombiazan'ny Japoney, ao anatin'izany ny fandraisana anjara amin'ny programa ara-kolontsaina iray manontolo, natao hampidirina amina lova sy lovantsofina japoney. Nisy ihany koa ny fotoana hahafantarana bebe kokoa momba ireo tombony azo amin'ny lova mahafinaritra ho an'ny sehatry ny fivoriana natolotry ny Lalao Olaimpika sy Paralaimpika Tokyo 2020.
Mazava ho azy fa noraisina tsara ny traikefa, miaraka amin'ny maherin'ny 92% ny solontena nanaovana fanadihadiana nanaiky na nanaiky mafy fa noho ny fahatongavan'izy ireo tao amin'ny Forum, dia heverin'izy ireo izao i Tokyo ho amin'ny fivoriana iraisam-pirenena ho avy.
Kazuko Toda, Tale, Business Events Tokyo, Tokyo Convention & Visitors Bureau dia nilaza hoe: "Miaraka amin'ny lohahevitra 'Building Global Connections Across Cultures', Tokyo no tanàna fandraisam-bahiny mendrika hiantohana ireo delegasiona manana traikefa tsy hay hadinoina tamin'ny Global Forum. Mameno ny programa NewCities manavao, TCVB dia faly nanatsara ny lafiny kolontsaina, nandentika ireo solontena tamin'ny fomban-drazana Japoney.
"Ny singa toy ny fanoratana tononkalo Haiku, lanonana nentim-paharazana dite ary fiakanjo kimono tsara tarehy, dia nalaza be tamin'ny vahininay, sady nanamafy ny maha-zava-dehibe ny fahatsiarovan-tena ara-kolontsaina rehefa mandinika ny toerana hisy ny hetsika fikambanan'izy ireo manaraka ny mpanomana hetsika."
Mpitantana fikambanana iraisam-pirenena 24 no nanatrika ny Global Forum, anisan'izany ireo solontena avy amin'ny International Federation of Airline Pilots 'Associations, International Association of Pediatric Dentistry, Women Deliver ary World Veterinary Association.
Raha niresaka momba ny zavatra niainany tao amin'ny Global Forum, Elisabeth Pollard, talen'ny Executive World Parkinson Coalition dia nilaza hoe: "Ny BestCities Global Forum dia zavatra niainana tsy nampino. Tsara tantana amin'ny toerana mahafinaritra miaraka amin'ireo mpandray anjara izay tena voatosika hianatra sy hizara fanao tsara indrindra amin'ny indostria. Teo anelanelan'ny mpandray anjara rehetra dia tsy maintsy nisy 1,000 XNUMX taona mahery ny traikefa matihanina amin'ny sehatry ny fivoriana - ara-bakiteny. Be dia be no nianaranay avy tamin'io zava-niainana lalina io. Hiverina tokoa aho ary hanome soso-kevitra amin'ny hafa izay heverin'izy ireo hanatrika amin'ny ho avy. ”
Tracy Bury, talen'ny Politika matihanina ao amin'ny Confederation of Physical Therapy manerantany: "Ny BestCities Global Forum dia manome fotoana tsara ho an'ny tambajotra, fomba fijery ao an-tanàna, torohevitra ary lahateny manentana izay manakoako amin'ny mpiara-miasa rehetra - na inona na inona sehatra niavianareo. Hetsika iray mampihetsi-po sy mihetsika izay manome valisoa ny fampiasam-potoana handinihana sy hifandraisana. ”
Ny mpandahateny tao amin'ny BestCities Global Forum 2017 dia nahitana mpanoratra sy CEO an'ny Tour Vancouver teo aloha, Rick Antonson, Prof. Hiroo Ichikawa, Tale Mpanatanteraky ny The Mori Memorial Foundation, mpanolo-tsaina iraisam-pirenena momba ny fianarana, Miriam van der Horst ary mpanelanelana amin'ny Forum Global Sean Blair, tompon'ny ProMeet. Andiany Cafés Exchange Exchange ihany koa no notarihin'ny filohan'ny IAPCO, Mathias Posch, raha i Andrés Gómez, avy amin'ny FTI Consulting kosa no nitazalaza ny Amerika Latina sy Kolombia.
Ny BestCities Global Forum 2018 dia hatao any Bogotá, Columbia amin'ny volana desambra. Themed Power of People, misokatra ho an'ny tompon'andraikitra ambony (na AMC amin'ny anaran'ny fikambanana) izy ity raha dinihina ny fampiantranoana hetsika ara-barotra iraisam-pirenena izay mihodina manerantany, mifandraika amin'ireo tanàna mpiara-miasa 12 BestCities Global Alliance: Berlin, Bogotá, Cape Town, Copenhagen, Dubai, Edinburgh, Houston, Madrid, Melbourne, Singapore, Tokyo ary Vancouver.